Bazitapela umnotho ezindaweni zaMakhosi - Bayede News
IMIBANGO ngoBukhosi ezizweni ezithile KwaZulu-Natal inomthelela ekungeneni ngenxeba kwezinkampani ezizimele ezisebenzisa ithuba zimbe isihlabathi esiwumnotho wabantu. IBAYEDE isike yabika ngalo mkhuba eLovu ngaphansi kwesizwe sakwaThoyana esingaphansi kweNkosi uNathi Maphumulo. Muva nje kuqhubeka esifanayo esizweni sakwaNodunga eNumber 1.
Zonke lezi zindawo zingaphansi kwe-Ingonyama Trust okuwumhlaba ongaphansi kwaMakhosi. Ingonyama Trust ithintiwe ngalolu daba kuleli sonto ukuze iphawule nokuthi uthini umthetho ngabagila nomkhuba nezinqumo okumele zithathwe. Kuze kwashaya isikhathi sokuloba bengaphenduli. Odabeni lakwaNodunga umsindo wakhona mdala kusukela kudlula emhlabeni iNkosi uQedisono Goodwill Zulu ngowezi-2016 lesi sizwe siphethwe yiBambabukhosi elizihlangulayo ngokuba nolwazi lwezinkampani esezingene zagamanxa emphakathini zimba isihlabathi. Ingxenye enkulu yendawo ekade iyithafa lesizwe isiphenduke imayini kuduma ogandaganda ubusuku nemini ngaphandle kolwazi lwesizwe nomphakathi. Phambilini umphakathi uthi ubuzitshela ukuthi labo abasebevule izimayini kule ndawo baxoxisana nabaholi besizwe ngakho kuyabaxaka uma kuwukuthi nabo bayazihlangula.
Lezi zinkampani zimba isihlabathi zisidayisele izinkampani ezinkulu ezenza usimende, kanye nezitolo ezidayisa impahla yokwakha nezinkampani ezakha izindlu zomxhaso. Ekhuluma neBAYEDE uMntwana uNkanyiso Zulu uthe kuyabadida okuqhubeka esizweni ngoba basebumnyameni ngalezi zinkampani ezithatha umnotho wabo. Amanye amalungu omphakathi akhulume naleli phephandaba athe indawo isiyasala iyimigodigodi ngoba kumbiwa zinsuku zonke. “Sesisabela ngisho nokuphepha kwezingane ezihamba kuyona le ndawo uma ziya ezikoleni noma zizidlalela,” kusho esinye isakhamuzi esicele ukungadalulwa. Imizamo yaleli phephandaba yokuxhumana nabezinkampani ezimba isihlabathi kule ndawo iphunzile. Abashayela ogandaganda namaloli bathe bona basuke bengenalwazi ngezivumelwano ezisuke zikhona bayathunywa kuphela endaweni balandele lowo myalelo. Umphakathi uthi uma kungacaci ngokuthi ngubani okumele ahole isizwe ngokusemthethweni kusazoqhubeka kube nezinkinga ngoba baningi osomathuba ababona intuba abangayisebenzisa.
Umndeni waseNdlunkulu uthi usamile ekutheni kwakuyisifiso seNkosi uQedisono Zulu ukuthi uBukhosi buthathwe indodana yayo uMntwana uNkanyiso, owaze wakugcizelela nalokho encwadini ayibhala ngezinsuku zakhe zokugcina esibhedlela iKing Dinizulu kuMnu uBongumusa Zulu owayesondelene kakhulu naye. Umndeni uthi kuwuphatha kabuhlungu ukuthi kuze kube yimanje isifiso seNkosi asikafezeki. Lolu daba umndeni usulidlulisele naseHhovisi likaNdunankulu uMnu uSihle Zikalala.
IBAYEDE inayo ikhophi yencwadi yeNkosi uZulu lapho ibalisa ngenye yamadodana ayo ibeka nezizathu zokuthi kungani ifuna iSihlalo sithathwe uMntwana uNkanyiso ichitha uMntwana uMlungisi.
Obambe iSihlalo njengamanje uMphamandla Zulu owabekwa ngowezi-2006 emuva kokuba iNkosi yalahlwa icala lokubulala ngowezi-2004 eyaligweba iminyaka eli-18, kodwa yadedelwa ngoshwele ngowezi-2010 ngenxa yokuziphatha kahle ejele.
INkosi izamile ukubuyela esikhundleni ngowezi-2012 emuva kokudedelwa ngesikhathi sekuphela isikhathi seBambabukhosi lokho ikwenza ngokuhlanganyela noMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu nomndeni.
Nalo iBambabukhosi labhala incwadi livuma ukuba umfowabo abuyiselwe eSihlalweni emuva kokukhululwa ejele, kepha kwagcina ngokuthi kungabi khona izinyathelo ezithathwayo neNkosi yahlatshwa ukugula okwagcina ngokuthi kuyenele ngowezi-2016 ngaphambi kokuthi udaba lwayo luphothulwe njengeziphakamiso zomndeni ngokubambisana noMnyango nalo iBambabukhosi. Kukhona nencwadi eyabhalwa iBambabukhosi ngowezi-2014 liyibhekise kophethe uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu- Natal uNkk uNomusa MaDube Ncube sinxusa ukuba umfowabo abuyiselwe eSihlalweni. Kule ncwadi iBambabukhosi lithi:
“Umfowethi uQedisono Goodwill Zulu salala naye esiswini sinye sabuye sashiyelana ibele. Kwenzeka ukuthi ngonyaka wezi-2001 ehlelwe isehlo sokulandelwa izitha, lokho okwenza ukuthi angabe esakwazi nokulala ekhaya. Izitha zamlandela zaze zashisa nomuzi wakithi. Ukuzama kwakhe ukuzivikela kwenza wagcina ephambane nomthetho kwamfaka esilingweni sokuthi agcine ebulale isitha sakhe esasiwungqondongqondo ekuzingelweni kwakhe, waboshwa wagwetshwa. Ukuziphatha kwakhe kahle ejele nokukhombisa ukuzisola ngesenzo sakhe kwenza washeshe wadedelwa. Mina nobaba abangasekho siyojabula kakhulu uma uMnyango ungasizwela kulesi sicelo sethu.”
Amalungu omndeni nababesondelene neNkosi uQedisono bathi umuntu ongaxazulula inkinga ekhona esizweni ukuze kunqandwe nezinkampani esezingena ngenxeba yilona iBambabukhosi ngokuthi lehle esikhundleni. Umndeni uthi naboMnyango phambilini bakufakazela ukuthi uMntwana uNkanyiso nguyena okumele abekwe emuva kokuveza bonke ubufakazi.Emuva kwamasonto uMnyango ungaphumeli obala ngokusayinisa uMntwana uNkanyiso ukuze athathe iSihlalo kube nokudideka emndenini nezinsolo zokuthi uMnyango uthatha izinhlangothi. Engxoxweni yangaphambilini noMntwana uNkanyiso wathi lolu daba selwehlukanise isizwe phakathi ngoba sifuna ukwazi ukuthi ubani iNkosi futhi nezinduna ziyalwazi. “abanye abaNtwana nomndeni sebaze badikila ngenxa yokuthalalisa koMnyango. Okuningi esizweni akukho, ayikho inkantolo yeNkosi, ihholo lomphakathi alikho ngisho nezinye izigodi azivuseleliwe,” kubeka uMntwana uNkanyiso. Wabuye wakhala nangoSihlalo owomndeni uMntwana uThabani Zulu ngakubize ngokuxova umndeni njengoba kunguye onokuxhumana okukhulu neBambabukhosi. Imizamo yokuthola uMnu uThabani Zulu izolo ayiphumelelanga.
Usibize savuma, ubeyiNkosi yoHlanga!
UMnu uBongumusa Zulu uthi noma engeyena owaseBukhosini kodwa wayesondelene kakhulu neNkosi uQedisono ngoba wayeyibhacise endaweni yakhe eThembeni eGroutville ngesikhathi inezinkinga futhi unobufakazi bokuthi yakhomba uNkanyiso njengozothatha isihlalo uma isidlulile.
UNdlunkulu uGugu Mkhize ongudadewabo weNkosi uQedisono encwadini efungelwe ayisayinile uthi: “Emuveni kokubona isikhathi sihamba nokuthi sibona sengathi uBukhosi buthanda ukuphuma endlini efanele ukuphatha sibe sesibhunga saqoka ukuthi uMntwana uNkanyiso Zulu kube nguye othatha izintambo zoBukhosi bakwaNodunga Number 1. Lokhu kuyisicelo sethu singuNdlunkulu ukuba iminyango efanele isilekelele ukuba uMntwana abekwe esikhundleni ngendlela enesizotha nobulungiswa.”
Bayede News Sep 26, 2019